VaMugabe Vokurudzira Kubvutwa neChisimba kweMapurazi
Kurume 16, 2009
Hurumende iri kuramba ichisvibisa chimiro chayo zvichitevera kutorwa nechisimba kuri kuitwa mapurazi evarimi vechichena pamwe nemamwewo anga ava pasi pevanhu vatema. Kubvutwa kwemapurazi uku kuri kuramba kuchiitika kunyange hazvo paine chibvumirano chakaitwa nemapato ezvematongerwo enyika.
Sangano reCommercial Farmers Union rinoti kubva pakanyoreranwa chibvumirano chekuumba hurumende yemubatanidzwa muna Gunyana gore rapera, mapurazi evachena anosvika mazana maviri nemashanu, kubva pamazana mana akanga asara, akatorwa zvechisimba nevakuru vakuru muhurumende, pamwe nemubato reZanu PF.
Sangano iri rinoti varimi vari kunyanya kusangana nedambudziko iri, varimi vari mumatunhu akaita seMashonaland Central, Masvingo neManicaland.
Mashoko atiri kutambira anotiwo kuMashonaland Central, purazi reMazoe Citrus Estates, iro rinorima maorenji, rinonzi rakatorwawo zvechisimba.
Commercial Farmers’ Union inoti dambudziko iri richakanganisa kurimwa kwegorosi remunguva yechando, uye gadziriro yemwaka unouya. Vachitaura pakupemberera kusvitsa kwavo makore makumi masere nemashanu kuChinhoyi, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakakurudzira kutorwa kwemapurazi uku.
Kutorwa kwemapurazi aya kunonziwo kuri kusvibisa moyo yemasangano ari kuedza kuda kubatsira Zimbabwe nemari. Masangano ari kuda kubatsira Zimbabwe nemari anosanganisira International Monetary Fund, World Bank, pamwe African Development Bank, ayo ari kuda kuona kugadzikana mumapurazi aya, sezvo hupfumi hwenyika huchibva mukurima.
Ukuwo sangano rinomirira vashandi vemumapurazi reGeneral Agricultural and Plantation Workers Union, GAPWUZ, rinoti zviitiko izvi zviri kukanganisawo zvikuru kurarama kwevashandi vemumapurazi aya.
Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, VaGolden Magwaza, kubvutwa kwemapurazi kuri kusiya vashandi vemumapurazi aya vasisina chekubata.
Nyanzvi munyaya dzekurima, VaRoger Mpande, vanotiwo kutorwa kwemapurazi uku kwakonzerwa nemutongo wakapiwa nedare reSADC Tribunal kuNamibia panyaya yevarimi vechichena vakakwira dare mushure mekunge vatorerwa minda yavo.
Dare re SADC Tribunal rakapa mutongo wekuti hurumende isabate mapurazi aya.
Hurukuro naVaGolden Magwaza
Hurukuro naVaRoger Mpande